Tranganà Fanolanana Vehivavy Tao Delhi Nahatezitra Olona Nanerana An’i India · Global Voices teny Malagasy
Tranganà Fanolanana Vehivavy Tao Delhi Nahatezitra Olona Nanerana An'i India
Voadika ny 28 Desambra 2012 13:18 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Italiano, Deutsch, বাংলা, Français, Ελληνικά, 简体中文, 繁體中文, English
Vehivavy 23 taona iray no naboridana, novonoina ary naolana tao anaty fiara fitateram-bahoaka mbola eny am-pandehanana ny 16 Desambra 2012, izay hita fa henatra sy fahafaham-baraka ao India izany fihetsika mamoafady izany.
Ilay niharan-doza sy ilay lehilahy niaraka taminy ihany koa, izay novelesina tamin'ny vy, dia natsipy teny ivelan'ilay fiara fitaterana, ary teny akaikin'ny tetezana Mahipalpur ao Delhi no nanipazana azy rehefa avy naboridana ny antsasaky ny vatany. Eny amin'ny hopitaly izy ankehitriny miaraka amin'ny ratra tena goavana tokoa.
Ilay niharan-doza, izay “physiothérapeute” sy ilay lehilahy niaraka taminy 28 taona, izay injiniera amin'ny informatika, dia teo am-piverenana avy nijery horonan-tsarimihetsika, ka nandeha fiara fitaterana manokana izay handeha ho any Dwarka. Ka ilay mpamily niaraka tamin'ireo olona miisa enina tao anatiny dia fantatra fa ireo no nanolana ity vehivavy ity. Tratran’ny polisy ilay fiara ka olona miisa efatra no voasambotra.
An-jatony isan-taona no misy tranganà fanolanana voamarika ao Delhi ary an-jatony mahery no tranga tsy fantatra. Natokana ho zava-pady tsy firesaka mihitsy ny fanolanana ao India izay mahatonga ny fitoriana ho vitsy dia vitsy. Nahatonga fanontaniana maro teo anatrehan'ny fitandroana ny filaminam-bahoaka ity zava-niseho ity tao amin'ny renivohitra Indiana ity.
Noresahina tao an-drenivohitra ary tonga hatrany amin'ny Parlemanta ilay raharaha. Fa ny tena resa-be dia hita any amin'ny tambajotra sosialy.
Ny Moonmoon Ghosh's Twitter kosa angamba no mandroaka ny ankamaroan'ireo fampitahorana:
@mooninanfield (Moonmoon Ghosh): Matahotra hoe vehivavy ny tena ao #Delhi. Eny, manerana an'i India mihitsy aza. Marary e! http://www.ndtv.com/article/cities
Sary avy amin'ny Diaben'ny janga Delhi. Sary nalain'i Rahul Kumar. Copyright Demotix (30/07/2011)
Resa-be maro tao amin'ny Twitter:
@vanithaj: Ireo niharan-doza tamin'ny fanolanana tao Delhi dia nanimba tena nanimba tanteraka ny tatitry ny mpitsabo. Ny fanamelohana ho faty ve no sahaza ho an'ny voapanga? Tsia, ny fandratràna ny filahiany
@ArvindKejriwal7 (Arvind Kejriwal): fanolanana miisa 635 no voaisa tao Delhi nandritry ny taona 2012. Kanefa mbola tsy misy olona nosaziana mandrak'androany? Tsia? Tsy manome vahana ny asa-ratsin'ny sasany ve izany? Tokony angalàna fanapahan-kevitra ao anatin'ny iray volana ny fanolanana isanisany avy
@anandmahindra (Anand Mahindra): Ny fepetra hentitry ny hatezerana no nitsangana ho valin'ny fanolanana isan-tokony tao Delhi. Tokony hitazona ilay raharaha ho mafana hatrany ny haino aman-jery ho an'ny rehetra mba hanetsehana azy
@JusticeForWomen: #tsy olan'i DELHI #ny FANOLANANA. Voaolana hatrany ny vehivavy sy ny tovovavy ISANANDDRO ary NA AIZA NA AIZA ao #Inde – Ilaina ny fijerena akaiky NASIONALY.
Vehivavy iray ao India androany no tezitra:
Tsy vao voalohany izao no niseho. Ary tsy io ihany koa no farany!
Mbola hiseho io, hatrany, hatrany, hatrany, imbetsaka ao anatin'ny iray andro, ao anatin'ity firenen-dehibe manmpo andriamani-bavy atao hoe India [..]
Miseho ao India fanolanana, satria firenena tsy mahatsapa tena isika.
An Indian Homemaker nanana fanontaniana maro:
Ahoana no mba fieritreretanareo ireo mpanolana izay tena mahazo vahana ao Delhi? [..]
Mieritreritra ve ianareo fa ataon'ny fiaraha-monina ho olo-meloka ireo mpanolana ireo? Maro amintsika no mieritreritra fa toy ny olona tsy mahafehy tena ihany ny mpanolana. Toa tahaka ny manana lasitra manokana isika raha hitsara ireo mpanao an-keriny, ary fantatry ny mpanolana izany.
Manoratra i Lakshmi Chaudhry:
Isaky ny mivoaka lohatenin-gazety ny fanolanana iray, isaky ny manokatra ny vavan'ny politisiana iray, dia fampahatsiarovana tsy mampa-te-hiditra ilay India hafa izay, dia ilay kambana amintsika mandeha miadana kokoa nefa mampatahotra kokoa ilay midrikina tsy mety mitombo na miova. Ary mivandravandra tsy azo lavina ihany koa fa io no tontolontsika tsy tena izy manontolo, miaina ao anatin'ny tavoara alonalon'ny filaminana tsara ambina. tavoara izay mety ho vaky araka izay itiavan'ilay India hafa azy izay iezahantsika fatratra isintahana.
Ireo lehilahy nandray anjara tamin'ny Diaben'ny Janga Delhi. Sary nalain'i Rahul Kumar. Copyright Demotix
Nandefa taratasy tany amin'ny mpanao fihetsiketsehana mafana fo i Ritu Lalit, mpanao lalàna sy mpampanoa lalàna. Ampahany tamin'izany:
Te hisarika ny sainareo amin'ny zava-misy marina eto amin'ny firenena aho, dia ireo vehivavintsika. Nahoana tsy voamarikareo ny olan'ireo vehivavy ireo? Nahoana no tsy mampiasa vava ianareo mba hanavotana azy ireo? Ny ankamaroan'ny vahoaka ao aminareo dia vehivavy avokoa, ary mampihetsika azy ireo ny tranga nisy tamin'ny 2002!
The Pregnant Thought mandresy lahatra:
Tsy vao teraka omaly ny resaka fanolanana tao Delhi. Ireo dia zanaka tsy nahazo fitaizàna tsara avy amintsika. Tsy nahomby i Delhi. Tsy nahomby isika.
Manana lalàna tena hentitra isika, kanefa isika tsy nampihatra azy. Mihoatra ny lalàna hentitra, dia tokony hanana kolon-tsaina mivelatra isika. Kolon-tsaina tahàka ny ahoana ary izany raha ny teny hoe “fananahana” dia teny ratsy, ary ny fanolanana no antonony.
Ka inona no mahafaty antoka antsika “mba hahitàna vahaolana, dia mila mampiharihary an'io isika”
Soratra miverina: Voaolana? Raiso Ny Vola, Dia Mangina! Hoy Ny Polisy Indiana · Global Voices teny Malagasy
[…] ity, tahaka ilay tranga fanolanana tao Delhi niseho tamin'ny volana Desambra 2012 (jereo ny tatitra ao amin'ny global Voices [mg]). Nanamafy ny soritsoritra nataon'ny mpitsabo fa niharan'ny fanolanana feno […]
22 Avrily 2013, 21:35